Modely telo ho an'ny dokambarotra indostrian'ny dia: CPA, PPC, ary CPM
Alarobia, Martsa 2, 2022 Alarobia, Martsa 2, 2022 Ivan Baidin
Raha te hahomby amin'ny indostria tena mifaninana toy ny fitsangatsanganana ianao, dia mila misafidy paikadin'ny dokam-barotra mifanaraka amin'ny tanjon'ny orinasanao sy ny laharam-pahamehanao. Soa ihany fa misy paikady maro momba ny fomba hampiroboroboana ny marika an-tserasera. Nanapa-kevitra ny hampitaha ny malaza indrindra amin'izy ireo izahay ary hanombantombana ny tombony sy ny tsy fahampian'izy ireo. Raha ny marina, tsy azo atao ny misafidy modely tokana izay tsara indrindra na aiza na aiza ary foana. LEHIBE
Faharanitan-tsaina artifisialy (AI) sy ny revolisiona amin'ny marketing nomerika
Talata, Septambra 28, 2021 Talata, Septambra 28, 2021 Isaja Karadovska
Ny marketing nomerika no fototry ny orinasa ecommerce rehetra. Nampiasaina hitondrana varotra, hampitombo ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika, ary hahatratra ny mpanjifa vaovao. Na izany aza, tototry ny tsena ankehitriny, ary ny orinasa ecommerce dia tokony hiasa mafy handresy ny fifaninanana. Tsy izany ihany fa izy ireo koa dia tokony hanara-maso ny fironana teknolojia farany ary hampihatra ny teknika ara-barotra mifanaraka amin'izany. Iray amin'ireo fanavaozana ara-teknolojia farany afaka mamolavola ny marketing dizitaly ny intelligence artifisialy (AI). Andao hojerentsika ny fomba. Olana lehibe amin'ny ankehitriny
Talata, Novambra 3, 2020 Talata, Novambra 3, 2020 Douglas Karr
Amin'ny maha mpivarotra azy, ny votoatin'ny ezaka ataontsika dia ny manandrana manondro ny varotra, ny marketing, ary ny hetsika momba ny dokam-barotra izay nalainay mba hamindrana ireo vinavinantsika mandritra ny dian'ny mpanjifa. Ireo mpanjifa ho avy dia saika tsy hanaraka lalana madio amin'ny alàlan'ny fiovam-po mihitsy, na dia mahatalanjona aza ny zavatra niainany. Raha resaka dokam-barotra anefa, mety ho lafo be ny vidin'ny fandraisana… noho izany manantena izahay ny hanery azy ireo hahafahanay mijery sy manatsara ny valin'ny fampielezan-kevitra. A
Alarobia, Oktobra 28, 2020 Alarobia, Oktobra 28, 2020 Chris Bross
Ny mpanjifa dia mamoaka dokam-barotra misy karama izay mampiroborobo ny teny fohy ao amin'ny doka… ny antso dia alefa any amin'ny ivon-telefaona izay tsy misy ny teny nalaina. Oops. Ny mpanjifa iray hafa dia mihodina matetika ny teny fanalahidy satria tsy mahazo fiovana. Oay… ny endrika fividianana entana dia mandefa amin'ny pejy tsy hita. Misy mpanjifa hafa koa mampiditra CAPTCHA amina endrika fitarihana… izay tsy mandeha mihitsy. Oops. Ohatra daholo ireo nandany vola an'arivony dolara tamin'ny orinasa